Idzi ndidzo nhau dzinouya kubva muruoko rweFirefox 67 | Linux Vakapindwa muropa
Idzi ndidzo nhau dzinouya kubva muruoko rweFirefox 67
Vhiki rino yakatangwa firefox 66, zvakadaro haigone kuiswa paLinux kuburikidza neyekuchengetedza yanga ichingowanikwa mumahofisi eAPT kwemaawa mashoma uye ivo vari kutotaura nezvazvo Firefox 67. Kuuya kweshanduro inotevera kwakarongerwa Chivabvu 14, 2019, mukati memwedzi isingasviki miviri, asi yekutanga beta yatove kuwanikwa kune ese Linux uye macOS neWindows. Ichasvika nenhau dzinoverengeka dzinonakidza.
Firefox 67 inotibvumidza isu kuisa akasiyana maMozilla web browser. Chii chinogona kuita basa iri kuve rakanakira? Semuenzaniso, kuisa yazvino vhezheni yakagadzika uye beta vhezheni iyo yatinogona kuyedza zvese zvichiri kuuya. Kuva neshanduro mbiri kunogona zvakare kunakidza kune vashandisi vanofarira kuve newebhu-maapps anomhanya sechirongwa: tinogona kuve neTwitter Lite muFirefox 67 web-app yakazvimiririra kune yedu huru browser.
Nhau dzinouya neFirefox 67
Kubvira kwekuisa kanopfuura kamwe chete chiitiko.
Zvichatitadzisa kuisa mavhezheni ekare anogona kukonzera kusagadzikana kwedata kana huwori.
Kuvharira cryptocurrency yekuchera software uye maratidziro mubrowser nekuda kweContact blocking zvido
Kugona kubvuma / kuramba zvinowedzerwa zvichangowedzerwa mumawindo windows.
Kubvira kwekugadzirisa matabo uye kuunza data kubva kune imwe browser.
Tsigiro yekuteedzera yakashandurwa CSS kodhi kubva kune yekuvandudza maturu pani.
Yakabviswa rutsigiro rwewebhucal.
Unogona kudhawunirodha Firefox 67 beta kubva Iyi link. Sechido, paunoburitsa faira nekukanya kaviri pa "firefox" uchaona kuti fafitera idzva reFirefox rakasiyana chose rinovhura, chimwe chinhu icho, kana ndisina kukanganisa, chisina kuitika pawakadhirowa Firefox 66. At kutanga chete Icho chiri muChirungu, asi iwe unogona kurodha pasuru yacho muchiSpanish kubva pazvirongwa.
Tichifunga kuti ini zvino ndogona kuve neshanduro mbiri dzeFirefox, ndiri kufunga kusabvisa beta yeFirefox 67 yandakangotora. Uye newe?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » Idzi ndidzo nhau dzinouya kubva muruoko rweFirefox 67
Ndezvipi Chrome DevTools zve?
LibreOffice 6.2.2 ikozvino yave kuwanikwa, inosvika ine bug fixes